Dhumo xogta qaali ah waa waayo-aragnimo ah oo aad u dhib badan for an macruufka qalab user iyo wuxuu noqon karaa qasaaro aad u weyn kuwa ku tiirsan yihiin ay fasalka laga reebo iPad ama iPhone ganacsiga. Waxaa jirta odhaah u lahayn in ay markii khasaaro xogta dhici doonaa. Waxay qaadataa oo keliya tiro yar oo labaad si aad u waayin dhamaan xogta aad. Tani waxaa si weyn looga fogaan karaa haddii mid ka mid og yahay sababaha soo gaartay xogta oo meelaha xusullada heegan iyaga oo ku saabsan waqtiyada oo dhan.
Qaybta 1. sababo Top khasaaraha xogta ka 6s iPhone aad (Plus)
User baadi: Mid ka mid ah sababaha ugu badan ee loo soo gaartay xogta waa la baraa aan habboonayn ee qalabka by user laftiisa.
Waqti halka socodka tirka badan fayl, sawiro, videos, qoraalka iyo wixii la mid ah, dadka isticmaala iPhone dooro xogta aan waajib ahayn in la tirtiro oo ay ogaadaan ka dib ka dib markii dhaawac loo sameeyo. Si ka duwan jooga feature guntimihii ee casriga ah Android meesha sanaanayaa xogta lumay waa u fududahay, dadka isticmaala iPhone aan ugu duceeyey habkaani aasaasiga ah inkastoo binta sare oo dukaamada waaweyn.
Talo: Si looga fogaado khasaare qiimo xogta, waxaa lagu talinayaa si loo hubiyo mar ka hor inta aanad hoos u weligood ka jaftaa icon bin ah, hana wax meesha biyomareenka ah.
Jailbreak - Tacaddi baabbi'in, jailbreak waa hab (sharci darro) go'aansaday by isticmaala iPhone inay siiso marin buuxa ay qalab, in uu yahay, ee xayiraad la joogo in qalabka waxaa lagu dhaafi off jidaynayey user u beddeli karo qalab ee firmware Idin.
Sida jirrabaya in JAILBREAK u muuqataa qalab aad, haddii aan loo samayn habraaca xaq iyo tallaabooyin taxaddar ah lagama maarmaanka ah, laga yaabo inuu khasaaro weyn ee labada xogta iyo software ka tago telefoonka in ay sanduuq oo keliya chips Silicon.
Talo: Had iyo jeer hubi in aad raacdo tallaabooyinka ekaaday haboon haddii aad diyaar u tahay in aad JAILBREAK 6s iPhone waa lagu daray.
nidaamka macruufka hagaajinta: Iyada oo suurogal ah in ay taasi u dhacdo waa in ka yar, laakiin qaar ka mid ah dadka isticmaala iPhone cabasho ku saabsan khasaaraha xogta ka dib markii lagu casriyeeyo macruufka si ay u version ugu dambeeyay.
Talo: xogta Had iyo gurmad aad muhiim ka hor inta ku rakibidda cayn kasta mid ka mid ah update firmware iyo sidoo kale in ay sii qalab aad kor u soo eedeeyay si ay u ma ordi aan ka bixin awooda halka dhexe ee update ah.
Qaar ka mid ah sababaha kale ee ka mid ah:
Device xiran by password illoobay.
Qaybta 2. Ways of Ujrooryinka tirtiray files ee iPhone ah
Waxaa jira diyaariyeen ah ee software ee laga heli karo kaas oo ka caawin kara iPhone user xun si ay uga caawiyaan dib u soo ceshano xogta lumay. Laakiin mid ka mid ah oo gooni u taagan oo ka intiisa kale waxaa Wondershare Dr. Fone ee macruufka. Waa software si sahlan loo isticmaalo waxba adag ku lug. Xitaa qofka celcelis ahaan aqoonta isticmaalaya computer shakhsi isticmaali kartaa software this fudayd.
Wondershare Dr. Fone ayaa design aad u sahlay iyo haysto a interface user deg deg ah. Waxay qaadataa qiyaastii 4 ilaa 6 daqiiqo Dr. Fone dib u soo ceshano ku saabsan 2 gigabytes xogta.
Waxaa jira saddex hab oo ay ka mid dib u soo ceshano karo xogta lumay, oo kala ah:
Ka soo kabashada si toos ah uga qalab macruufka ah.
Ka soo kabashada si toos ah uga gurmad Lugood.
Ka soo kabashada si toos ah uga gurmad iCloud.
1. Talaabooyinka ku lug leh si toos ah uu ka soo kabsaday iPhone 6s (Plus)
Fiiro gaar ah: Ka hor inta Socota inay tallaabooyinka hoos ku xusan, in la hubiyo in qalab aad waxaa ay kor u soo eedeeyay in ay 50% in ay hubiyaan in nasashada lahayn wax alla wixii.
Talaabada 1: Isku iPhone in computer taas oo Wondershare Dr. Fone la geliyo. Burcad codsiga iyo xiro qalabka aad via ka cable USB bixiyo iyo oggolaadaan codsiga si toos ah loo ogaado qalab aad. Haddii qalab aad laguma ogaan karo, hubi in cable USB waxaa sida oo shaqeeya oo si fiican loo geliyo in dekedda.
Tallaabada 3. Ka dib baaritaan ay dhamaato, suuqa kala codsiga aad ku tusi doonaa liiska labada xogta jirta oo laga badiyay ee iPhone. Waxaa sii joogo fursad ay waxyaabaha bandhigay tirtiray kaliya ee codsiga. Waxa kale oo aad ka raadin kartaa macluumaadka laga badiyay magaceeda xusay in bar raadinta siiyey.
Tallaabada 4. Calaamad saar dhinaca garab xogta aad u baahan tahay ka dibna riix "Ladnaansho" button jidaynayey xogta si ay u badbaadaan by default on your computer. Wixii xog ku lug iMessages, qoraalada ama xiriirada, waxaa jiri doona doorasho ah dhisayaa ilaa weydiinaya in si loo badbaadiyo macluumaadka ku saabsan pc ama si toos ah qalab aad.
2. Talaabooyinka lug ku soo kabsaday xogta si toos ah uga gurmad iCloud.
Talaabada 1: Wondershare Open Dr. Fone dooro "kabsado iCloud gurmad file". Habkani wuxuu u baahan yahay si aad u soo geli iCloud id xisaabta iyo password.
Fadlan la soco Wondershare ah oo ixtiraamaya gaarka ah iyo vouches xaqiiqda ah o weydaan macluumaadka ku saabsan xisaabtaada iyo macluumaadka kale ee la xiriira in la farsameeyo inta lagu jiro casharada.
Talaabada 2: Marka aad siiso faahfaahinta loo baahan yahay oo si guul leh login shubo xisaabta, codsiga soo bandhigaysaa dhan iCloud gurmad files lala in aad xisaabta. Browse ka mid ah liiska dooro mid ka mid ah ka aad rabto in aad soo kabsado xogta aad ka oo ku dhacay "Download".
Si loo yareeyo wakhtiga duuban, Fone Dr. waxay kuu ogolaaneysaa in ay doortaan faylasha gaar ah oo aad xiiso halkii ay ka soo degsado file oo dhan.
Tallaabada 4: Ka dib markii faylasha loo baahan yahay waa la bixi, waxaad isticmaali kartaa iyaga dhex iyo sax ku calaamadee macluumaadka aad rabto. Xogta waa la badbaadin doonaa mid aad pc ama si toos ah qalabka ku xiran go'aankaaga.
3. Talaabooyinka inuu ka soo kabsado xogta laga gurmad Lugood
Talaabada 1: Daahfurka Wondershare Dr. Fone qalab soo kabashada ee macruufka iyo soo kabashada doorashada gurmad Lugood. Codsiyada hidi Lugood gurmad soo kabashada qalab lagu ogaan doonaa oo dhan Lugood files gurmad joogo. Dooro ku haboon Lugood gurmad file ah in aad rabto in aad soo kabsado xogta aad ka.
Talaabada 2: bilaw sawirka. Waxaa lagu talinayaa in samir halka scan ku dhacdaa.
Tallaabo 3: Ka dib baaritaan la dhammeeyo, waxaa lagu siin doonaa liiska oo dhan xogta laga soo file gurmad ah. Scroll iyada oo xogta dooro kuwa aad dooneyso in aad soo kabsado. Xiriirada, fariimo iyo macluumaadka sida qoraalada waxaa si toos ah kabsaday kartaa iPhone.
Wondershare Dr. Fone si weyn lagu talinayaa in ay dadka u nugul oo intaa ka badan lumiso xogta ay. Mid ka mid ah waa in xogta qalab ee had iyo jeer gurmad todobaadle ah si loo hubiyo dib u soo kabashada xogta deg deg ah si looga fogaado farabadan oo ah kharashka waqti ku sanaanayaa dib xogta.
> Resource > iPhone 6s> iPhone Data Recovery: 3 Siyaabaha la isu soo ceshano iPhone 6s (Plus) Khasaaray Files